Timber Wood Anticorrosive Daaweynta Haanta - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Supply Kartida: 10 dajisaa per Month
Wood waa cayn kasta ah noolaha noolaha, waxa uu leeyahay sifooyin wanaagsan, waa sida wax soo saarka dabiiciga ah oo cagaar ah, laakiin qoryaha waa mid aad u fudud in ay dhibaatadu ka Kadalaan iyo dhaawacyo kale oo ka luma qiimaha ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, daaweynta ilaalinta gaarka ah anti-daxalka oo qoryo ka dhigi kartaa ilaa for this iin, iyo dheeraan hawshii qoryaha.
In deegaan u xiran yihiin, fiirsashada qaar ka mid ah iska caabin ah daxalka, iska caabin dab, dareere dyeing ka dib markii vacuum, cadaadis sarreeya, soo noqnoqoshada, cadaadis inta jeer galay duurkii ayaa in gudaha unugyada, sidaas si saamaynta anti-daxalka, ama caariyaysi, aboor, anti aboor iyo retardant olol, dyeing iwm
Wood taangiga daaweynta anticorrosive waa daawaynta qurmidda qoryo ah, waa habka ugu muhiimsan ee giraan ah, shirkadda sida ay howsha qoryo gudaha iyo isticmaalka. Production waa faahfaahinta kala duwan oo qoryo taangiga preservative,-wareegsanaa oo dhan, saddex-geesood ah la kulmaan baahida macaamiisha ah ee anti-daxalka kala duwan ee.
The tayo sare leh ilaalinta dahaadhida qoryaha tan k leedahay is haysta oo macquul ah design dhismaha, hawlgalka fudud, hawlaha sare, miday xoog leh, awoodda processing qoryo, xulashada qalabka, waqtiga shaqada kaabayaal ah ayaa waxaa toogtay, oolnimada sare, warshadaynta kiimikada, kharashka wax soo saarka yar yahay, oo uusan nijaasayn deegaanka.
VOLUME TIME oo keli dawee (m³)
CADAADISKA (kg / ㎡)
Previous: Rubber Products Vulcanizing Haanta
Carbonization Autoclave Wood aalkolada Haanta
Vacuum Wood adag Wood Daaweynta Haanta Cadaadis
taangiga karaya biyo kulul
Cadaadiska Wood Daaweynta
Cadaadiska Wood Daaweynta Qalabka
taangiga Daaweynta caag
caag mashiinka taangiga Daaweynta
taangiga vulcanizing caag
taangiga anticorrosive alwaax
taangiga karinta alwaax
taangiga dahaadhida alwaax
Processing alwaax Qalabka Wood Processing
taangiga daaweynta alwaax
Wood Anitseptic Qalabka
qoryo taangiga anticorrosive
taangiga karinta qori
Wood dahaadhida Machine
taangiga dahaadhida qoryaha
Wood qurmidda Machine
Wood Daaweynta Qalabka
Wood Daaweynta Machine
qoryo taangiga daaweynta
Wood Wolmanizing Qalabka
Hilibka ka dhigid Qalabka